Ụbọchị My Pet » Gịnị Women Chee Banyere N'oge Mmekọahụ
Ezie na mmekọahụ bụ a pụrụ iche, chiri anya, na-na mbuari, mgbe ụfọdụ ndị inyom uche agbasaghị kpafuo, n'agbanyeghị otú ihe dị ukwuu mmekọahụ bụ. N'okpuru ebe a bụ nanị ụfọdụ n'ime echiche na ike tinye a inyom uche n'oge mmekọahụ.
TV na-egosi / Movies: Ma gị dị na-ele a oké fim ma ọ bụ na-na n'etiti a TV usoro, mgbe ụfọdụ reevaluating ibé na odide etịbe ke ini mmekọahụ. Anyị enweghị ike-enyere ya aka ma ọ bụrụ na anyị nwere ihe “a-ha” oge n'etiti mmekọahụ, ọ dị nnọọ pụtara na mmekọahụ bụ na egwu.
Nri abalị: Ma, ma ọ bụrụ na ị na-eme ekpochapụ gị nwaanyị anya nke ụkwụ ya ozugbo ọ abatakwa ụzọ ya ọrụ ụbọchị Ohere inweta bụ ọ ga na-eche banyere nri abalị mgbe ị bụ n'ime ya. Anyị enweghị ike-enyere ya aka ma ọ bụrụ na anyị nwere ike multitask, gbakwunyere ka-eme ihe n'eziokwu, mmekọahụ na-emekarị na-arụ ọrụ ruo agụụ na ịma ihe ị chọrọ ka ga-enyere iri nri abalị njikere na ọtụtụ ihe ngwa ngwa.
-Agbanwe Agbanwe Positions: Ka ihu ya, Mgbe ụfọdụ anyị na anya-mmekọrịta anyị na mmekọ. Ọ bụ karịsịa njọ mgbe otu onye na-anụ ụtọ ya karịa ndị ọzọ. Mgbe ladies ịhụ ha ụmụ okorobịa nnọọ n'ime a ụfọdụ ọnọdụ, ha agaghị na-atụ aro onye ọhụrụ ebe anyị obi ụtọ na-abịa site-eme ka anyị nwoke yana. Mgbe nke a emee, echiche nke “Ọ bụ ya bụ kwa a ọnọdụ ịgbanwe. M ga-eme ka hà na-abụ n'ime ya dị nnọọ ka ọ bụ”, “mere na-adịghị anyị na-eme na otu onye dị ọhụrụ ọnọdụ anyị dị gbalịrị na hụrụ n'anya?”, na / ma ọ bụ “gbaa, mere ka nke a na ọnọdụ na-afụ ụfụ?” gbapụta n'ime anyị ụbụrụ.
New Positions: Ezie ịmafe ya n'ime bed bụ mgbe a ezi echiche, ọ bụghị ihe niile na ọnọdụ ndị dị mfe dị ka ha yiri. Ọ dị mkpa ka nwere fun na ochi, karịsịa mgbe ọnọdụ dị nnọọ adịghị ka oke na-arụ ọrụ. Site “Ọ na mberede echefuwo ọ na-ezighị ezi onu” ka “nwere ike otu onye n'ime anyị iru Odi enweghị ada” ka “Echere m na m nwere ike fart ma ọ bụrụ na anyị anọgide na-aga na ya dị ka nke a”, niile na echiche na ike nwere ike na-aga site inyom uche.
Orgasms: Ladies, anyị nile maara na mgbe anyị na-Yana tupu anyị nwoke. Ezie na nke a nwere ike ịbụ a ugboro ugboro omume, ọ eme site n'oge ruo n'oge. Ma mgbe, ọbụna mgbe anyị orgasm, mmekọahụ na-adị ịtụnanya, anyị na-na-atọ anyị ibe. Ọ bụ oge a na mgbe ụmụ nwanyị na-eche “Ọ bụrụ na m ákwá ọnụ, ma eleghị anya ga-enyere ya yana”.
Anu ulo: Anyị niile na-anyị n'anya anu ulo ka ha na a pụrụ nnọọ iche òtù ezinụlọ nke. N'ihi na anyị na-agbasaghị na-ụzọ na-emeghe n'oge mmekọahụ dị ka meows, barks, na scratching n'ọnụ ụzọ n'oge mmekọahụ nwere ike ịkwụsịtụ ọnọdụ. Otú ọ dị, na nke a na-ahọrọ na-abịa òkù na gị na furry enyi ike ile gị na-enwe mmekọahụ. Ọ bụ mgbe anyị na-enwetaghị ha anya na anyị na-eche “Enweghị m ike na-enwe mmekọahụ na m Pita na-ele m” ma ọ bụ “Gịnị mere e ji ọ / ọ na-akpụ akpụ nso anyị? Achọghị m ka m anyị mmekọahụ na-etre”.
Atula egwu, ndị ikom dị ka ọbụna dị ka ndị a echiche na-aga site inyom uche, na mmekọahụ bụ ka nnọọ ụtọ. Na ndị inyom, gị mkpa echegbula dị ka ị na-abụghị nanị onye na-multi-eche n'oge mmekọahụ.